असार मसान्तमा ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजनाको एनएभी घट्यो
साउन ६, काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित ग्लोबल आइमएइ समुन्नत योजना १ ले असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार योजनाको एनएभी (प्रति इकाई खुद मूल्य) जेठ मसान्तको तुलनामा असार मसान्तमा कमी आएको छ । जेठ महीनामा योजनाको एनएभी रू. २३ दशमलव ७७ रहेकोमा असार मसान्तमा घटेर रू. २२ दशमलव ६३ कायम भएको हो ।
त्यसैगरी, योजनाको नाफामा पनि कमी आएको छ । जेठ महीनाको तुलनामा असार महीनामा योजनाको नाफा ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आएको हो । योजनाले जेठ महीनामा रू. १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४२ हजार नाफा कमाएकोमा असार महीनामा रू. १ अर्ब १६ करोड २२ लाखमा सीमित भएको हो ।
जेठ महीनाको तुलनामा असार महीनामा योजनाको आम्दानीमा कमी आएकाले नाफा घटेको देखिन्छ । योजनाले असार मसान्तसम्ममा सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर र डिबेञ्चरमा गरेको लगानीको लागत मूल्य रू. १ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख रहेकोमा यसको बजार मूल्य रू. १ अर्ब ७९ करोड ६५ लाख ५३ हजार पुगेको हो ।